Sahityabatika: गजल "के दोष ?"
गजल "के दोष ?"
वाटरपार्क नेपालगंज ﻿
हिमाल फुटेर छेउकुना काटे भेलले खोलीको के दोष ?
बोल्छ जे नी धारहिन जिब्रो अनि बोलीको के दोष ?
दुस्मन देखि ताक्छौ निशाना बन्दुकको नाल छातीमा
छेड पर्छ जब तन वारपार गरेर अनि गोलीको के दोष ?
कालो रातो निलो हरियो अनेकन रङ्गमा पोतिएर
लगायौ दाग आफ्नै निधारमा अब होलीको के दोष ?
गर्न खोजेनौ केही नयाँ उपलब्धी आज यो विहानीमा
हिजो भएन मेरो र आज छैन मेरो तर भोलीको के दोष ?